मैले अजयजीलाई फसाएको छैन जो सीइओ भएपनि यो घटनाको छानवीन जरुरी थियो - Wnepal.com
शोभन देव पन्त, सिइओ बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड
० सीइओ साब पूर्व सीइओ र कर्मचारीलाई जेल पुर्याएको आरोप छ नि ?
यस्तो काम म बाट हुँदैन एउटा कुरा प्रस्ट छ । जो सीइओ भएको भए पनि यो कर्जा काण्ड छानवीन जरुरी थियो । मैले जनताको पैसाको सुरक्षा गर्ने जमर्को गरेको मात्र हो । मैले अजयजीलाई फसाउने कुनै कारण नै छैन । जे आरोप लगाए पनि हुन्छ । जे बोल्दा पनि हुन्छ ।
० पूर्व सीइओ अजयजीसंग यो कर्जा उठाउने बारे छलफल त भयो होला नि ?
मैले २ पटक उहाँलाई फोन गरि सोधेको थिए । उहाँले मलाई थाहा छैन भन्नु भयो । मैले यो कर्जा कसरी दिएको हो भनी छलफल बैंकका कर्मचारीबीच पटक÷पटक गरे तर कर्जा काण्डमा पक्राउ भएका धेरैले जागिर नै छाडेर जानु भयो नि ।
० तपाई माथी बैंक अफ काठमाण्डूका कर्मचारीलाई पेलेको र तत्कालिन लुम्बिनी बैंकका कर्मचारीलाई काखी च्यापेको आरोप पनि छ नि ?
लुम्बिनी बैंक मरिसक्यो । मरेको मान्छेको कुरा नगरौं । बैंक अफ काठमाण्डूमा राम्रो काम गर्नेहरुलाई ठाउँ छ । बदमास गर्नेहरुले छाडेर गएको चाँहि सत्य हो । पेलेको लखेटेको भन्ने कुरा म बाट सम्भव नै छैन । मेरा लागि सबै कर्मचरी सम्मान छन् । एउटा कुरा चाहि सत्य हो । जनताको पैसा माथी बदमासी गर्नेहरुलाई मेरो बैंकमा ठाउँ छैन ।
० यो कर्जा काण्डमा तत्कालीन सीइओलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको चर्चा पनि छ नि ?
यो विषय अब प्रहरीले हेर्ने हो गल्ती नगर्नेहरुले सफाई पाउने छन् । सीइओको हस्ताक्षर भएपछि नै प्रहरीले तत्कालीन सीइओलाई नियन्त्रणमा लिएको होला नि ।
० राष्ट्र बैंक मार्फत सीआईबीमा नगई किन सिधै सीआईबीमा उजुरी बैंकले गर्यो । यसबाट तपाई माथी शंका गरिने ठाउँ त देखिन्छ नि ?
मलाई अहिले अजयजीलाई फसाएको आरोप आएको सुनेको छु । मेरो ठाउँमा अजयजी भए पनि छानवीन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा यो केश जाने नै थियो । जनताको पैसा सुरक्षा गर्ने कर्तव्य मेरो हो । हिजो कैलालीको यस्तो घटना अजयजीले नै अनुसन्धानमा पठाउनु भएको हो नि ।
० बैंकका कर्मचरीहरुकै सलग्नतामा यस्तो भएको हो त ?
यो अब प्रहरीको अनुसन्धानको विषय हो । खोला बैंकमा राखी कर्जा दिएको छ । ४÷५ करोड जनताको पैसा यो छानवीन हुनु जरुरी थियो र छ पनि । नियमक निकायले पनि छानवीन गर्छ होला नि होइन र ?
० तपाईको बैंकको एउटा घटनाले बैंकरहरुमा त्रास माबै छैन सो घटना भाइरल समेत बनेको छ नि ?
यस्तो कर्जा दिने र लिने एउटा समुह नै छ भन्ने मैले सुनेको छु । अरु बैंकमा पनि यस्ता घटना भएको सुनेको छु । यो गिरोहलाई कारवाही गरिनु पर्दछ । भोली जो कोही फस्न सक्दछन् । जुनसुकै बैंकका सीइओ साब फस्न सक्नुहुन्छ । नि यस घटनाले सबैलाई सचेत बनाएको चाँहि सत्य हो ।
० मेगा बैंकले अस्वीकार गरेको कर्जा बैंक अफ काठमाण्डूबाट कसरी स्वीकृत भएको रहेछ सीइओ साब ?
यो मलाई पनि थाहा छैन । म त्यस बेला विओकेमा थिइन । कसरी भयो, किन गरियो यस बारेमा प्रहरीले अब छानवीन गर्दै छ । शंकाको घेराउमा परेका बैंकरहरुसंग बयान लिएको छ । यथार्थ कुरा बाहिर आउने नै छ नि ।
० अरु बैंकमा पनि यस्ता घटना भएका छन् र थिए । तर, तपाई हतार÷हतार प्रहरीमा जानु पर्ने कारण चाँहि के हो त ?
कर्जाको ब्याज आएन, कर्जा विग्रियो, ताकेता भए, कुनै उपाय लागेन, प्रोभिजन कर्जा भयो । अब धितो त बिक्री गरि असुल उपर गर्नु पर्यो नि । धितो खोज्दै जाँदा खोला फेला पर्यो । अब तपाई भन्नुहोस् के गर्ने जनताको पैसा उठाउने कि चुप लागेर बस्ने ?
० कर्जा असुली न्यायाधिकरण पनि थियो होला नि सीइओ साब ?
थियो तर, लालपूर्जा हेर्दा खोला फेला पर्यो । ऋणीले तिर्न नसक्ने बतायो । कर्जा दिनेहरुले भटाभट जागिर छोड्न थाले । अरुले गरेको पाप मैले भोग्ने कुरा त भएन नि भूपेन्द्रजी । कसरी कर्जा गर्यो । कसले के गरे प्रहरीले प्रतिवेदन नै ल्याउला नि । पछि थाहा भइहाल्छ नि ।
(सीइओ पन्तसंग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानीका केही अंश)
कामना सेवाले जित्यो कार्पाेरेट ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट